Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247607 times)
« Reply #100 on: May 11, 2011, 11:10:04 AM »
" အ သက် ကွာ လွန်း တယ်.."
ပီတာလေး ကျောင်းမှ ပြန်လာသည် ။ အဖေက မေးသည် ။
" သား..လာစမ်း. မင်းတို့ ရဲ့အတန်းပိုင်ဆရာမက အသစ်ဆို ဟုတ်လား.
ဘယ့်နှယ့်လဲ..သား သူ့ ကို သဘောကျရဲ့ လား.."
" သိပ်သဘောကျတယ် အဖေ..တစ်ခုပဲ ၀မ်းနည်းတယ်..
သူ နဲ့ကျနော် အသက်ချင်း ကွာလွန်းတယ်.."
" ကြည့် ချင် တယ် "
မိမိ၏ အစ်မထံ ခဏ ခဏ လာနေသော လူငယ်ကို ပီတာလေးက ပြောသည် ။
" ကိုချာလီ..နဖူးပေါ်က ဆံပင်ကို ခဏ ဖယ်လိုက်ပါလားဗျ.."
" ဘာဖြစ်လို့ လဲ..င့ါဆံပင် ပုံစံကို မင်း သဘောမကျလို့ လား.."
" မဟုတ်ပါဘူး...စာလုံးတစ်လုံး ကြည့်ချင်လို့"
" ဘာ စာလုံးလဲ.."
" မမ က ပြောလို့ ပါ...ကိုချာလီရဲ့နဖူးပေါ်မှာ ဏှာဘူး ဆိုတာ အထင်းသား
ပေါ်နေတယ် တဲ့ "
« Reply #101 on: May 11, 2011, 11:34:57 AM »
" အူ အ တက် "
" မိန်းမရဲ့အူအတက် ဘယ်မှာ ရှိသလဲ... "
" ၀င်ဝင်ချင်း ဘယ်ဖက်မှာ.."
" စပ် ကူး မတ် ကူး အ ရွယ် "
" စပ်ကူးမတ်ကူးအရွယ် ဆိုတာ ဘယ်အရွယ်ကို ခေါ်တာလဲ.."
" အသက် မပြည့်သေးလို့ပင်စင် မပေးဘူး...မိန်းမကလည်း အသက်ကြီးလို့ ဆိုပြီး
အင်တင်တင် လုပ်တယ်..အဲ့ဒီအရွယ်မျိုးကို ပြောတာ.."
" ဂီ တ စာ ဆို "
နာမည်ကြီး ဂီတစာဆိုကို သတင်းထောက်က မေးသည် ။
" ဆရာ.. ဆရာ ဘယ်တုန်းက သီချင်း စရေးပါသလဲ ခင်ဗျာ.."
" ကျနော့်ရဲ့မိန်းမ ခုနှစ်ယောက်မြောက် ကလေးမွေးတဲ့အခါ ကျနော့်ရဲ့ 
ဖန်တီးနိုင်မှု စွမ်းအားကို တစ်ခြားနေရာမှာ အသုံးချရတော့မယ်လို့ 
« Reply #102 on: May 12, 2011, 09:35:38 AM »
" နောက် မှ ပြော ပါ ရ စေ "
" ဟယ်လို..ဟယ်လို..သားဖွားဆေးရုံက ပြောနေပါတယ်...ဦးဘမောင်ကို ပြောပေးပါ..
သူ့ ဇနီး သုံးမွှာပူး မွေးတယ်လို့..သုံးယောက်စလုံး သမီးလေးတွေ ချည်းပဲ.."
" အခုချက်ချင်းတော့ သတင်းမပေးပါရစေနဲ့ ..သူ အခု မုတ်ဆိပ်ရိတ်နေတယ်..."
" စိတ် ညစ် တယ် "
အသက် ၃၀ အရွယ် အပျိုကြီးမမ သည် မှန်တင်ခုံရှေ့တွင် ထိုင်ရင်း မိမိဘာသာ ပြောသည် ။
" ယောင်္ကျား မြန်မြန်ရရင် ကောင်းမယ်....ခဏ ခဏ အလှပြင်နေရတာ ငြီးငွေ့ လှပြီ...."
" ကြာ ကြာ စောင့် စ ရာ မ လို "
" မေရီ...ယူ နောက်အိမ်ထောင် ပြုလိုက်တယ်ဆို..ဟုတ်လား.."
" ဟုတ်တယ်..ဒါပေမဲ့ သူက အိုင့်ထက် အသက်အများကြီးငယ်နေလို့ 
" အို..ဒါများ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်နေရတယ်လို့ ...ကြည့်နေ..
ယူ နဲ့နေပြီး မကြာခင် ယူ့ လိုပဲ သူ အိုစာ လာမှာပါ "
« Reply #103 on: May 12, 2011, 01:03:34 PM »
" ပြန် လာ မယ် "
လင်မယားချင်း စကားများ ရန်ဖြစ်ကြသည် ။ မိန်းမက ကြိမ်းမောင်းသည် ။
" ဒီနေ့ ပဲ ကျမ အမေ့ဆီသွားမယ်...ဒါပေမဲ့ ရှင့်ကို သတိပေးလိုက်မယ်...
ကျမတို့မုချ ပြန်လာမယ် "
" ဘယ် လို စစ် မှာ လဲ "
ယောင်္ကျားဖြစ်သူ မနက် လေးနာရီတွင် အိမ်သို့ ပြန်ရောက်လာသည် ။ မိန်းမက တံခါးဝတွင်
ခါးထောက်ပြီး မျက်စောင်းထိုးကြည့်သည် ။ ထို့ နောက် ပြောသည် ။
" ရုံးက လူတွေနဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာ သွားစားတယ်လို့ရှင်ပြောတယ် .. ကောင်းပြီ
အခု ချက်ချင်း အိပ်ရာထဲ ၀င်စမ်း ရှင် ဘယ်သွားခဲ့သလဲ ဆိုတာ ကျမ စစ်မယ်.."
" မ ချစ် လို့ပေါ့ "
စကားများ ရန်ဖြစ်ကြပြီးနောက် ယောင်္ကျားက မိန်းမကို ပြောသည် ။.
" ဟေ့ မင်း ခဏ ခဏ ပြောသလို မင်းသာ ငါ့ကို တကယ်ချစ်ရင် ငါ့အစား
တစ်ခြား ယောင်္ကျားကို ယူသင့်တာပေါ့ . မဟုတ်ဘူးလား "
« Reply #104 on: May 12, 2011, 01:15:14 PM »
" နှုတ် လုံ သူ "
" အင်နီ ရေ..၊ မေရီ့ ကို လျှို့ ဝှက် စကား ပြောလို့ ရမယ် ထင်သလား ဟင် "
" စ်ိတ်ချလက်ချသာ ပြော ၊ မေရီက အင်မတန် နှုတ်လုံတယ်.. လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်က
သူ့ ဦးလေးဆီက အမွေတွေ အများကြီး ရလိုက်တယ်..အဲ့ဒီ့အကြောင်းကို အခုထိ
သူ့ယောင်္ကျား မသိသေးဘူး "
" တစ် ယောက် လို သေး တယ် "
ဆေးရုံအုပ်ကြီးက ညတာဝန်ကျ ဆရာဝန်ကို မေးသည် ။
" ဒီည လူနာ ဘယ်နှစ်ယောက် ဆုံးသွားသေးသလဲ..."
" ထူးဆန်းလှချည်လား...ကျနော် မနက်က ဆေးညွှန်း လေးခု ရေးပေးလိုက်တာပဲ "
" အာ မ ခံ "
လယ်ပိုင်ရှင် သူဌေးကြီး ဦးဘမောင် ကို မိတ်ဆွေ က မေးသည် ။
" ဦးဘမောင်..ဘယ်သွားမလို့ လဲ "
" မြို့ တက်ပြီး အိမ်ကို မီးဘေး နဲ့မုန်တိုင်းဘေး က ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ 
အာမခံ သွားထားမလို့ ပါ."
" မီး အာမခံ ထားတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ..မုန်တိုင်းကို ဦးဘမောင် ဘယ်လို ဖန်တီးမှာတုံးဗျ.."
« Reply #105 on: May 12, 2011, 03:16:47 PM »
" မှား ပြီး ချီး မွမ်း မိ တာ ကို "
" အောင်မလေး..အင်မတန် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးပါလား...ပါးချိုင့်လေးနဲ့ကြည့်စမ်း ကြည့်စမ်း
လူမှန်သမျှကို ပြုံးပြနေပါလား..၀၀တုတ်တုတ်နဲ့အရုပ်လေးလိုပဲ...ဒါနဲ့ကိုဘမောင်..ကျနော့်ကို ငွေ
နှစ်ထောင်လောက် ချေးပါလားဟင် "
" မချေးနိုင်ဘူး..ဒီ ကလေး က မယားပါ ကလေး.."
" အ ထင် မှား "
" ဘမောင် ဆိုတဲ့ အကောင် ကျုပ်သမီးကို ခိုးပြေးသွားတယ် ဗျာ..."
" ဘယ်သူမပြု မိမိမှု တဲ့..ခင်ဗျား သူ့ ကို အိမ် ခဏ ခဏ လာခွင့်ပြုတာကိုးဗျ.."
" ကျနော့် မိန်းမကို ဒီကောင် လာပိုးတယ် ထင်မိတာကိုးဗျ.."
" လူ ဆိုး သုံး ယောက် "
သေဒဏ်ကျခံ ထားရသော လူသတ်သမား ထောင်ဖောက် ထွက်ပြေးသဖြင့် ၄င်း၏
ရှေ့ တည့်တည့်. မျက်နှာပုံ၊ .လက်ဝဲ ဘေးတစ်စောင်းပုံ..လက်ယာ ဘေးတစ်စောင်းပုံ
တို့ ကို ရဲဌာန အသီးသီးသို့ပေးပို့ သည် ။ နောက်တစ်နေ့ တွင် ရဲချုပ်သို့လိပ်မူထား
သော ကြေးနန်းစာတစ်စောင် နယ်ရဲစခန်းတစ်ခုမှ ရောက်ရှိလာသည် ။
" ဓါတ်ပုံများကို ရှိပါသည် ။ ၄င်းတို့ ကို ဖမ်းဆီးရာတွင် သုံးယောက်စလုံး သေဆုံးသွား
ကြပါသည် ။ "
« Reply #106 on: May 12, 2011, 03:29:09 PM »
" သတ် မယ် ထင် လို့ပါ "
တောမြို့ လေးတစ်မြို့ သို့အ၀င်လမ်းတွင် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ လာသော မြင်းလှည်းကို ကုန်တင်ကားကြီး တစ်စင်းက
အရှိန်ဖြင့် ၀င်တိုက်မိသည် ။ ဒဏ်ရာကြောင့် မြင်းသည် ဆန့် ငင် ဆန့် ငင် ဖြစ်နေသည် ။ မြင်းလှည်းဆရာ သတိ
မေ့ပြီး ပက်လက်ဖြစ်နေသည် ။ ကုန်တင်ကား ဒရိုင်ဘာမှာ ဖြစ်ဖြစ်ချင်း ကားကို အတင်းမောင်းပြေးသည် ။
ဖြတ်သွားသော ရဲသားက မြင်းအနားသို့ကပ်လာပြီး ခံစားနေရသည့် ဝေဒနာကို မကြည့်ရက်သဖြင့် မြင်း၏ နားထင်
တည့်တည့်သို့သေနတ်ဖြင့် ပစ်ချလိုက်သည် ။ ထို့ နောက် မြင်းလှည်းဆရာဘက် လျှောက်လာကာ မေးသည် ။
" ခင်ဗျား ဘယ့်နှယ့် နေသေးလဲ "
မြင်းလှည်းဆရာ လဲနေရာမှ ချက်ချင်း ထသည် ။ လူငယ်လေး တစ်ယောက်လို ရဲသားကို အလေးပြုပြီး ပြာပြာသလဲ
" နေကောင်းပါတယ်..နေကောင်းပါတယ်...ကားမတိုက်ခင်ကထက်တောင် ကောင်းပါသေးတယ်..သွားတော့မယ်နော်
« Reply #107 on: May 12, 2011, 03:40:15 PM »
" အ ညွှန်း အ တိုင်း "
ကိုချူချာ ကော်ဖီဘူးတစ်ဘူး ၀ယ်လာသည် ။ ကော်ဖီဖျော်ရန် အညွှန်းကို ဖတ်သည် ။
" ကော်ဖီမှုန့်တစ်ဇွန်းကို လောင်းထည့်ပါ..."
ကိုချူချာ ပါးစပ်ထဲ လောင်းထည့်သည် ။
" သကြား နှစ်ဇွန်း ထည့်ပါ "
သကြားကို ပါးစပ်ထဲ ထည့်လိုက်သည် ။
" ထို့ နောက် ရေနွေးကို လောင်းထည့်ပါ "
ရေနွေးကို ပါးစပ်ထဲ လောင်းသည် ။
" မွှေပါ "
ကိုချူချာ ထပြီး ဟိုခုန် ဒီခုန် လုပ်သည် ။ နှုတ်မှလည်း မပီမသ ပြောသည် ။
" ဟင်း...သူ့ကော်ဖီဖျော်နည်းကလည်း တစ်မျိုးကြီး ကြံကြံဖန်ဖန်
" ပိုက် ဆံ ဘယ် မှာ လဲ "
နွားနို့ ဆိုင်ထဲသို့ကိုချူချာ ၀င်လာသည် ။ လက်ဆွဲချိုင့်ကို အရောင်းသမ အား ကမ်းပေးပြီး ပြောသည် ။
" ကျနော့်ကို နွားနို့တစ်လီတာ ထည့်ပေးပါ.."
အရောင်းသမသည် နွားနို့ ကို ချိုင့်ထဲ လောင်းထည့်ပေးပြီး မေးသည် ။
" ရှင့်မှာ ပိုက်ဆံကော ပါသလား "
" ပါတာပေါ့ ချိုင့်ထဲမှာ..."
« Reply #108 on: May 12, 2011, 03:51:25 PM »
" အား လုံး ကောင်း ပါ တယ် "
ဇနီးဖြစ်သူက ကိုချူချာကို ပြောသည် ။
" ရော့ .ပိုက်ဆံယူသွား...ဆိုင်မှာ ပန်းသီး တစ်ကီလို ၀ယ်ခဲ့ပါ..အရောင်းသမကို ပြောနော်..
ကောင်းတာတွေ ရွေးပေးပါလို့ဧည့်သည်တွေ အတွက်ရှင့် "
ကိုချူချာ ပန်းသီးတစ်ကီလို ၀ယ်ပြီး အိမ်ပြန်လာသည် ။ အိမ်သို့ ရောက်သောအခါ မိန်းမက မေးသည် ။
" ဘယ့်နှယ့်လဲ..ရှင် ၀ယ်လာတဲ့ ပန်းသီးတွေ ကောင်းရဲ့ လား..."
" အင်မတန် ကောင်းတယ်..တစ်လုံးမှ မကောင်းတာ မပါဘူး..ငါ အကုန်လုံးကို မြည်းကြည့်ပြီးပြီ.."
" ပိုး ဟပ် သတ် ဆေး "
ကိုချူချာ ပိုးဟပ်သတ်ဆေး ၀ယ်လာသည် ။ အရောင်းသမက မြေဖြူခဲ ပုံစံ ပိုးဟပ်သတ်ဆေး ဆယ်တောင့်
ပါသည့် ဘူးတစ်ဘူးကို ရောင်းလိုက်သည် ။ ဘူးကိုယူပြီး ကိုချူချာ အိမ်ပြန်သွားသည် ။ နောက်တစ်နေ့ တွင်
ဆိုင်သို့ ပြန်လာပြီး နောက်ထပ် ဘူးတစ်ရာ ရောင်းရန် ပြောသည် ။
" ဒီလောက် အများကြီး ဘာလုပ်ဖို့ လဲ "
" အိမ်က ပိုးဟပ်တွေ အရှောင်အတိမ်း ကောင်းကြတယ်ဗျ..ဒီကောင်တွေကို ကျနော် ဆေးတောင့်နဲ့ ပေါက်သတ်
တယ်...ဒါပေမဲ့ အမြဲတမ်း မမှန်ဘူး..."
« Reply #109 on: May 12, 2011, 04:11:03 PM »
" ရုပ် ရှင် ကြည့် ချင် တယ် "
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရန် ကိုချူချာ ရုပ်ရှင်ရုံသို့ ရောက်လာသည် ။ လက်မှတ်ရောင်း အမျိုးသမီးက ၄င်းကို ပြောသည် ။
" လွန်ခဲ့တဲ့ နာရီဝက်အတွင်းမှာ ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ကြည့်ဖို့လက်မှတ်လာဝယ်တာ ဒါပါနဲ့ ဆို ရှစ်ကြိမ် ရှိပြီရှင့်
" အ၀င်ဝက ငနဲတစ်ကောင် ကျနော့်လက်မှတ်ကို အကြိမ်တိုင်း ဆွဲဖြဲပစ်လို့"
" ချစ် တဲ့ အ ကြောင်း ပဲ ပြော ပါ "
" ရှင် ကျမကို ချစ်တယ်နော်..."
" သိပ်ကို ချစ်တာပေါ့ကွယ် "
" အဲ့ဒါဆို ဘယ်တော့ လက်ထပ်ကြမလဲ ဟင်.."
" ဟေ့ .ဟေ့..ခေါင်းစဉ်ကို .ဗြုန်းစားကြီး ပြောင်းမပစ်နဲ့ လေ..."
" အ ခြေ အ နေ "
" ငါ ချစ်တယ်..၊ မင်း ချစ်တယ် ၊ သူလည်း ချစ်တယ် ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ မောင်ပီတာ
" ဟုတ်ကဲ့..တစ်ယောက်ယောက် မုချ သေရမယ့် အခြေအနေကို ရည်ညွှန်းတာပါ.."
( ကိုချမ်းကိုရေ..တိုက်ဆိုင်သွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ. သူနာပြုဆရာမလေး ညွှန်း )